China 3 oz solder nkpuchi ịkwụnye ENEPIG arọ ọla kọpa osisi emepụta na suppliers | Kangna
3 oz solder nkpuchi ịkwụnye ENEPIG arọ ọla kọpa
A na-ejikarị PCB ọla kọpa dị egwu na sistemụ Ike Eletrọniki na Power Tụkwasịnụ ebe enwere nnukwu ihe dị ugbu a ma ọ bụ ohere ịme ngwa ngwa ịgbapụ ugbu a. Nnukwu ọla kọpa nwere ike ime ka ụlọ PCB na-adịghị ike ghọọ ikpo okwu siri ike, nke a pụrụ ịdabere na ya, nke na-adịte aka ma na-egbochi mkpa maka mgbakwunye na ihe ọkụkụ dị ka Heat sink, fans, etc.
E nweghị ọkọlọtọ definition maka Arọ Ọla Kọpa PCB, na-emekarị ma ọ bụrụ na ọla kọpa ọkpụrụkpụ bụ karịa 30z.
A na-akọwa mbadamba ahụ dị ka bọọdụ ọla kọpa.
Oké ọla kọpa osisi arụmọrụ: oké ọla kọpa osisi nwere nke kacha mma ndọtị arụmọrụ, na-ejedebeghị site nhazi okpomọkụ, elu agbaze mgbe nwere ike ji mee ka oxygen ịfụ, ala okpomọkụ bụ kenkuwa na ndị ọzọ na-ekpo ọkụ-agbaze ịgbado ọkụ, na-ọkụ mgbochi, bụ ndị na-abụghị -combustible ihe. Efere ọla kọpa na-etolite mkpuchi siri ike, nke na-adịghị egbu egbu, ọbụlagodi, na ọnọdụ ikuku ikuku na-emebi emebi.
Uru nke nnukwu efere ọla kọpa: A na-eji nnukwu ọla kọpa mee ihe n'ọtụtụ ngwa ngwa, ngwaahịa ndị dị elu, ndị agha, ọgwụ na ngwa eletriki ndị ọzọ. Ntinye nke efere ọla kọpa dị ogologo na-arụ ọrụ ogologo oge nke bọọdụ sekit bụ nke bụ isi akụrụngwa nke ngwaahịa akụrụngwa eletriki ,, ma n'otu oge ahụ, ọ bụ nnukwu enyemaka iji mee ka mpịakọta nke ngwa elektrọnik dị mfe.
Arọ ọla kọpa PCBs
Ihe PCB ọ bụla na-arụpụta, ma ọ bụ otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ nwere ọla kọpa etching iji wepu ọla kọpa achọghị na plating ịgbakwunye ọkpụrụkpụ na ụgbọ elu, mpe mpe akwa, na akara na Plated-through-oghere (PTH). Nwepụta nke Okpo Ọla Kọpa PCBs yiri nke ọma nke iwu FR-4 PCB mgbe niile mana ha chọrọ usoro etching na electroplating nke na-eme ka ọkpụrụkpụ nke elu osisi na-enweghị ịgbanwe akara oyi akwa. Okpokoro ihu igwe nwere ike ijikwa ọla kọpa agbakwunyere n'ihi usoro ndị ọkachamara na-agụnye ọsọ ọsọ ọsọ, ntinye onwe onye, ​​na iche ma ọ bụ nkewa.
Etkpụrụ etching nke ọma anaghị arụ ọrụ maka nnukwu PCB ọla kọpa ma mepụta ahịhịa na-enweghị atụ na oke akụkụ. Anyị na-eji usoro ịkwa iko dị elu iji nweta akara kwụ ọtọ na oke oke oke nwere okpuru ala na-eleghara anya. Anyị usoro mmako plating mbelata ndị na-eguzogide ọla kọpa metụtara si otú ime ka okpomọkụ-eduzi ikike na ntachi obi maka kwes nchegbu.
Mbelata na nguzogide ọkụ na-eme ka ikike ikpo ọkụ nke sekit gị dịkwuo mma site na convection thermal, conduction, and radiation. Anyị Fabricators na-elekwasị anya na ndim mgbidi PTH nke na-eje ozi ọtụtụ uru site shrinking na oyi akwa ọnụ na mbenata impedance, ụkwụ-ebipụta, na mkpokọta n'ichepụta na-eri. Anyị na-anya isi dị ukwuu ịbụ otu n'ime ndị kachasị ọnụ na mma Ebu kọpa PCBs na-emepụta gburugburu ụwa.
Agbanyeghị, PCB ndị a gụnyere ụgwọ dị elu karịa PCB oge niile dịka usoro etching siri ike ma sie ike. A ghaghị ikpochapụ nnukwu ọla kọpa n'oge usoro Etching. Ọzọkwa, usoro lamination chọrọ iji Prepreg tinye n'ọrụ na ọdịnaya resin dị elu iji jupụta oghere n'etiti akara ọla kọpa. Yabụ, ọnụ ahịa nke nrụpụta dị elu karịa PCB mgbe niile. Ka o sina dị, anyị na-eji usoro Blue Bar Method na agbakwunyere ọla kọpa usoro maka ịnye gị ọkwa kachasị elu na ọnụahịa kacha mma.
Ojiji nke nnukwu ọla kọpa PCBs
Anyị na-arụpụta ma na-enye PCB ndị a ebe enwere ọhụụ ma ọ bụ na mberede na ọnọdụ dị ike ma na-abawanye ụba. Extremedị ọkwa ndị a dị oke oke iji mebie PCB mgbe niile ma kpọọ maka ọla kọpa dị mkpa nke na-ewetakwa ọnụ ọgụgụ oyi akwa, na-enye impedance dị ala, ma na-enyere obere akara aka na nnukwu ego echekwara. N'okpuru bụ ụfọdụ ebe na d ngwa na Ebu Ọla Kọpa PCBs na-eji na:
• Sistemụ Nkesa ike
• Modulu Nkwalite Ike
• Igbe igbe nkesa Automotive
• Ike Onyinye maka Rada Systems
• Ngwá ọrụ ịgbado ọkụ
• HVAC Usoro
• Ngwa Nuclear
• Nchedo na bufee Relays
• Railway Ọdụdọ Systems
• Solar Panel emepụta
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọchịchọ maka PCB ndị a abawanyela na ngwa ngwa, agha, kọmputa, na ngwa njikwa ụlọ ọrụ. Kangna nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe na ịmịpụta PCBs dị arọ nke kachasị mma. Ndị ọkachamara anyị nwere nkà na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu ma mepụta mbadamba ọhụụ nke na-emezu atụmatụ gị na ihe mgbaru ọsọ ị ga-enweta. Anyị na-aghọta na Arọ ọla kọpa PCB emebe-abịa na ndị ọzọ mgbagwoju anya na ya mere, anyị anya adreesị niile ajụjụ na nchegbu tupu ya n'ihu na mmepụta.
Ihe na - eme anyị pụrụ iche bụ na bọọdụ anyị mepere emepe gafere usoro nyocha dị iche iche tupu enye ya ndị ahịa anyị. Anyị na-ụlọ mma akara ngalaba emesi àgwà nke Arọ ọla kọpa PCBs na-eme ka n'aka na ikpeazụ ngwaahịa osobo ndị kasị mma mma na di ntakiri ka ọ dịghị ihe ize ndụ nke circuit ọdịda.
Nke gara aga: Resin ịkwụnye oghere Microvia Imikpu ọlaọcha HDI na laser egwu
Osote: ngwa ngwa multilayer High Tg Board na immersion gold maka modem